Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze-Samsung Smart TV (2020) - Ezamahhala nezikhokhelwayo - Izinhlelo Zokusebenza
Uma ufuna i-Best Smart TV Apps ye-Samsung TV yakho, usendaweni efanele. Sibeke ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Samsung Smart TV ezizokusiza ukuthi uthole okuningi ku-Samsung TV yakho.AbakwaSamsung bebelokhu bephahlaza ibhola epaki uma kukhulunywa ngokwenza ama-Smart TV. Ngokuqalwa okuningi kwe-4K, 8K OLED TV eminyakeni embalwa edlule, abantu baqale ukukhetha i-Samsung kunontanga yayo.
Uma unesikrini esingaletha ikhwalithi yesithombe se-UHD, ukusebenzisa amandla aso; ngokuqinisekile udinga ukuba nezinhlelo zokusebenza ezithile ezikuvumela ukuthi ubeke ikhwalithi yevidiyo enhle kakhulu ye-Samsung.Zihlukaniswe ngokubanzi ngezigaba ezimbili- Izinhlelo Zokusebenza Ezamahhala (Noma i-Freemium Model) ne-Paid Apps.
Izinhlelo zokusebenza zamahhala ze-Smart TV ze-Samsung TV:
1. I-Samsung TV Plus
“I-TV yamahhala. Azikho izintambo ezinamathiselwe ”njengoba iSamsung ikubiza kanjalo; lolu hlelo lokusebenza lunikeza amakhulu emibukiso neziteshi ezibukhoma ezizokunikeza izinkulungwane zezizathu zokuzilanda. AbakwaSamsung baqinisekise ukuthi kunokuthile kwawo wonke umuntu lapha.Akukona nje ukuthi i-Samsung TV Plus ikuvumela ukuthi ufinyelele imibukiso nama-movie afunwayo, kepha ikunika amandla okufinyelela i-Live TV noma kuphi! Yini enye ongayicela kunkonzo yamahhala.
Into ehamba phambili nge-Samsung TV Plus ukuthi ikuvumela ukuthi ufinyelele kuzo zonke lezi zinto zamahhala ngaphandle kwesidingo sokusetha noma iyiphi imininingwane yekhadi lesikweletu nazo. Umane ulande uhlelo lokusebenza, futhi usukulungele ukuhamba.Iningi lama-Samsung TV aphume ngemuva konyaka u-2016 asekela uhlelo lwamahhala lwe-Samsung TV Plus kanye namadivayisi ambalwa we-Galaxy afaka phakathi i-S10, S20, Note 10, ne-Note 20 nayo ingayinika amandla le nsiza yamahhala.
Sincome iVudu ngoba, futhi, wuhlelo lokusebenza lwamahhala oluzonikeza ongakhetha kukho bukela amakhulu ama-movie nemibukiso . Ukhokha kuphela uma ufuna ukubuka ifilimu ethile noma umbukiso otholakala kuphela lapho ukhokhela khona ukuze ubuke.
IVudu iyipulatifomu eqhekeze ibhalansi ephelele phakathi kwezici ezikhokhelwayo nezamahhala zohlelo lokusebenza oluhlukile ku-Samsung Smart TV. Abasebenzisi bangamane baqashe ama-movie nezinhlelo ze-TV amahora angama-24 noma bathenge okuqukethwe; ukuthi zingabuka noma kunini, kunoma iyiphi idivayisi.
IVudu ingesinye sezitolo ezihola phambili ze-ULTRAVIOLET, eydijithali yama-digital digital based; evumela umsebenzisi ukuthi avule amakhophi edijithali we-Blu-Ray nama-DVD athengwe yibo. Ukuphela kokufanele ukwenze ukufaka ikhodi yokubuka lawa ma-movie ku-Smart TV yakho.
3. IPluto TV
Kungenzeka ukuthi awuzange uzwe ngalesi sigcawu sokusakaza, kodwa kholwa izwi lethu; ingenye yezinsizakalo zokusakaza ezinhle kakhulu laphaya ngoba kumahhala ngokuphelele. Abaningi bacabanga ukuthi iPluto TV wuhlelo lokusebenza olungekho emthethweni olusebenzisa ama-movie nemibukiso yokuphanga ukuhlinzeka ngezinsizakalo, kepha akunjalo.
IPluto TV ingahlinzeka ngokuqukethwe mahhala ngoba iphethwe yiViacom CBS, eneziteshi eziningana nezindlu zokukhiqiza ama-movie ngaphansi kwamaphiko ayo. Futhi uhlelo lokusebenza lenza imali ngokukhangisa elingakuthengisa lapho usakaza noma yikuphi okuqukethwe.
IPluto TV inikela ngokuqukethwe okunhlobonhlobo; njengoba inikeza iqoqo elikhulu leziteshi ezibukhoma ezingaphezu kuka-250 + kufaka phakathi ukuthandwa kwe-NBC News, i-CBSN, i-CNN, i-Fox Sports, isiteshi se-NFL, i-Comedy Central, i-MTV Nickelodeon, ne-Entertainment Tonight.
Lolu hlelo lokusebenza oluthile lwenza okungaphezu kokusakaza nje ama-movie nemibukiso ejwayelekile. Cha, asisho ukuthi isakaza iziteshi ze-Alien noma okuthile okunjalo.I-Plex ikunika amandla okusakaza amafayela akho nge-Samsung Smart TV yakho. Ingabizwa ngokuthi yiMedia Management Service ekusiza ukuthi wakhe iMedia Library yakho.
Futhi awutholi nje ukusakaza okuqukethwe kusuka kulabhulali yakho kepha ungakubuka kunoma yimaphi amadivayisi akho (asekela i-plex; okwenziwa amadivayisi amaningi). Ukuze usebenzise i-Plex, abasebenzisi bamane basetha iseva kudivayisi besebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Plex Media Server bese bengeza imitapo yolwazi yendawo, bese u-voila, ulungile.
Isetshenziswa kakhulu ngabantu abane-MP3 ebalulekile, i-M4A, i-FLAC, ne-WMA, futhi amanye amafayela anjalo asekelwa uma kukhulunywa ngamafayela alalelwayo futhi inamandla okusekela uhlobo lwe-MP4, MKV, HEVC, AVI, MOV, ne-DIVX wamafayela.Ibuye ivumele abasebenzisi ukuthi babonise amafayela wesithombe se-JPG, PNG, RAW, ne-TBN. Ngaphezu kwalokho, i-Plex ingasakaza ngisho naku-4K UHD.
Ngenkathi i-YouTube isiphenduke injini yesibili ethandwa kakhulu emhlabeni. IVimeo ithola ikhwalithi yayo enhle kakhulu yokuqukethwe.Lapho i-YouTube inokuqukethwe okunamandla nokuxubile kakhulu, okuqukethwe ku-Vimeo kukhethelwe ohlangothini olukhulile. Uma usufikile kuVimeo, uzobona ukuthi kubuswa izinkulungwane zeminyaka abafuna ukugcina uhlangothi lwabo lobuciko nobuciko kungxenyekazi yokubuka.
IVimeo ayihlukile ngokuphelele kwi-YouTube; ibuye iqashe ama-movie nemibukiso ngezindleko ezingabukwa ngohlelo lwazo lokusebenza nakuwebhusayithi. Ukuhlola izinto zakamuva, ezihamba phambili, nezinkulu kufanele uhlole ukukhetha kwabasebenzi.
6. Amashubhu we-TV
I-Tubi TV enye insizakalo evela kumasevisi asuselwa ku-Fremium. Ungavivinya okuqukethwe kweTubi Tv mahhala, kepha kukhona amathani ama-movie okufanele uwakhokhele. Ungaqasha lawa ma-movie amahora angafika kwangu-48 noma umane uwathenga impilo yakho yonke.
Azikho izinto eziningi ezinikezwa yiTubi TV; ukhumbula ukuthi iTubi TV imahhala ngokuphelele, lokhu kufanele kulindelwe.Ungakha izinhla zokudlalayo, ulayini, bese uthola uhlu lwamawashi olunconyiwe ngohlelo.
Chofoza lapha ukuze usebenzise i-Tubi TV
Uma ufuna okuthile kumaCom Comies noma i-horror noma uhlobo lwedokhumentari, ungathola ama-movie amahle ngokwanele. Futhi uma uyingane enhliziyweni noma uma ingane yakho ingumthandi wamakhathuni amadala opopayi esikoleni, iPopcorn Flix wuhlelo lokusebenza ongeke uthande ukuluphuthelwa. Kuyimayini yegolide yokuqukethwe kwe-animated okubuyela emuva kuma-80s nasekupheleni kweminyaka yama-90.
Uma ulindele ubusuku beshashalazi elifana nekhwalithi ku-Samsung Smart TV yakho entsha, shintsha isikebhe. IPopcorn Flix ithola ikhwalithi yesithombe emaphakathi. Ungalindeli lutho olungaphezu kwesinqumo esingu-720P kumabhayisikobho noma kumidlalo.Uma uzimisele ukudela ikhwalithi yesithombe ngokuqukethwe okuhle, nakanjani singancoma iPopcorn Flix.
I-YouTube ingomunye wabadlali abavelele phakathi kwazo zonke izinsizakalo ezikuhlu zombili. I-YouTube iyingxenye ebalulekile Yezinsizakalo ze-Google. Ukungena ku-YouTube ku-Samsung Smart TV yakho, okudingeka ukwenze nje ukulanda i-YouTube App esitolo sohlelo lokusebenza.
I-YouTube isanda kuqala ukunikeza insizakalo yayo ye- 'Premium'. Le nsizakalo ngeke ishise imbobo ephaketheni lakho, futhi singancoma ukuthi uhlelo lomndeni ukuthola izinzuzo ezengeziwe (Ungabelana ngalokhu phakathi kwama-akhawunti ahlukene we-google). Uma usuthole ubulungu be-premium be-Akhawunti yakho ye-Google, ungasebenzisa i-akhawunti efanayo kumadivayisi amaningi okungewakho.
I-YouTube inenani eliphakeme kakhulu lokuqukethwe okubonakalayo ku-inthanethi, kakhulu kangangokuba kungakuthatha iminyaka eyi-1 918,440 ukubukela wonke amavidiyo asepulatifomu (Kwengezwa okuningi njalo ngeminithi).Ngaphezu kwalokho, i-YouTube inegalari enkulu, enkulu kakhulu yamavidiyo omculo nama-movie ukuze uhlale ujatshuliswa.
Umhlahlandlela Wokubuka i-YouTube ku-TV
9. Facebook Buka
Uma ungomunye walabo bantu abasachitha isikhathi sabo esiningi ku-Facebook, kufanele nakanjani ufune ukubukwa kwe-Facebook ku-Samsung Smart TV App Store.
I-Facebook Watch isevisi ye-Facebook ye-Video-On-Demand equkethe okuqukethwe kwe-Facebook kanye nokunye okuqukethwe kwe-premium. Yize ingafaki ithelevishini ebukhoma noma iziteshi ezibukhoma eziku-inthanethi, ivumela abadali ukuthi benze amafomethi amafomethi amafushane futhi amade ngakho-ke iyafana ne-YouTube. Okuqukethwe ekubukweni kwe-Facebook kuyingxubevange, njengoba okuqukethwe okuningi kulayishwa ngabadali abangabodwana, kanti okunye okuqukethwe kudalwa ngochwepheshe, imali ekhokhwa yi-Facebook.
Nge-Facebook Watch, uzokwazi ukubuka wonke amavidiyo we-Facebook afika ku-akhawunti yakho mahhala; yebo, kuyinsizakalo yamahhala! Odinga ukukwenza ukulanda uhlelo lokusebenza, ungene ngemvume, bese ufaka ikhodi enamadijithi ayisishiyagalombili. Ngokushesha nje lapho i-akhawunti ivuseleleka, usukulungele ukuhamba.
10. I-FunBox UHD
Sibonile izinhlelo eziningi ongazilanda ku-Samsung Smart TV yakho esakaza i-movie, imibukiso, nomculo. Kepha kunokunye okuningi kokuqukethwe okubonakalayo kunalokhu. I-FunBox UHD yiphakheji ephelele ezosebenzela zonke izinhloso zakho.
I-FunBox UHD ikuvumela ukuthi uhlole izindawo ezimangalisa, ziveze ithuba lokuhlangana nabantu abanamandla, abanamandla. Izithombe ze-Ultra HD ziletha imidwebo yesimo sobuciko nemibala icace bha, amehlo akho ngeke akholelwe.
Ukukhishwa kuphela ngalolu hlelo lokusebenza ukuthi kutholakala kuphela kuma-Samsung TV akhethiwe. Ngaphandle kwalokho, uhlelo lokusebenza oluhle ukubuka amavidiyo amnandi online.
Izinhlelo ezikhokhelwayo noma ze-Premium ze-Samsung SmartTV:
1. Isiteshi seRoku
Njengoba ubungalindela, I-Roku Channel iphethwe nguRoku, umhlinzeki wesevisi yokusakaza. Isiteshi seRoku singesinye sezisekelo eziphakeme kakhulu zomsebenzisi uma kukhulunywa ngezinsizakalo zokusakaza ezisekelwa isikhangiso futhi sinikeza ukuncintisana okunzima kumasevisi okusakaza asuselwa ekubhaliseni njengeNetflix, i-Amazon Prime Video, nezinye.
Umsebenzisi we-Roku Channel uthanda ukuthi uhlelo lokusebenza lukulawula kanjani okuqukethwe okwenzelwe bona. Abasebenzisi bajabulela kakhulu izincomo zokuqukethwe ezenziwa uhlelo lokusebenza. I-algorithm isebenza kahle kakhulu futhi iphakamisa okuqukethwe ngokufanele.Ngenkathi okuqukethwe okusha kungezwa njalo, lokhu futhi kusekela Iziteshi ze-Live Sports nezindaba ezinjenge-ABC neNewsy. Uma ungumnikazi we-4K noma i-8K Samsung TV, kuzofanele ubheke insiza engcono, njengoba iRoku Channel ingenakho ukuxhaswa kwe-UHD.
2. IHulu (e-US kuphela)
IHulu iphakathi kokuthandwa kakhulu izinsizakalo zokusakaza emakethe futhi kunezizathu eziningana ezibuyisela emuva. Inkampani yakwaWalt ​​Disney Media ingumnikazi wale nkonzo yokusakaza, ngakho-ke uzokwazi ukubona ama-movie nezinhlelo eziningi ze-Disney ezisezingeni eliphezulu, nakanjani.Esinye sezizathu sokwaziwa kweHulu ukuthi isakaza imibukiso ethandwayo kusenesikhathi uma iqhathaniswa nontanga yayo. Imibukiso eminingi ethandwayo ingena kuHulu Network kungakapheli amahora angama-24 kusakazwa.
Muva nje uHulu ungeze isici se-Live TV, esizokuvumela finyelela imibukiso ebukhoma nama-movie kusuka ku-Samsung Smart TV yakho. Yize iHulu ivumela kuphela izikrini ezimbili ngesikhathi esisodwa, ungathatha uhlelo lwe-premium ($ 9.99 / ngenyanga) ukuthola izikrini ezingenamkhawulo.
Siyazi iningi lenu belicabanga, kungani singakasho lutho ngeNetflix. INetflix ibiyindawo yezokuzijabulisa eku-inthanethi kule minyaka embalwa edlule.INetflix ibuye ibanga elide selokhu yethulwa e-US ngo-1998 njengenkonzo yokuqasha i-DVD. INetflix ibone ukukhula okukhulu njengoba isizinda sayo sabasebenzisi sikhuphukile sisuka ku-600k nje ngo-2002 saya ngaphezu kwezigidi ezi-4.2 ngo-2005.
INetflix izethule njengesevisi yokusakaza ngo-2007 futhi inabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-159 ngonyaka ka-2019 e-US kuphela. Ayimile selokhu yaba isevisi yokusakaza enkulu kunazo zonke emhlabeni.INetflix inamagalari abezindaba aqukethe i- ngaphezu kwama-movie ayi-13781 , futhi kungamaphesenti ayikhulu okubiza ukukusebenzisa kule nsizakalo yokusakaza; enikeza ukulungiswa kwe-4K UHD kwe-Samsung Smart TV yakho.
4. I-Amazon Prime Video
I-Amazon Prime Video ukuphela kwembangi esizwayo, enganikeza ukulwa okunzima kuNetflix uma kukhulunywa ngokuletha okuqukethwe okuhle.Ukutholakala kwe-Prime Video kuza ne-Amazon Prime Membership, ekulethela izinzuzo ezingeziwe. Ungangena ku-Amazon Prime Video, i-Amazon Music, izinzuzo ezinkulu ku-Amazon Shopping, nakuzo zonke ezinye izinsiza ze-Amazon.
Ubulungu obuphezulu buza ngentengo eshibhile uma uyiqhathanisa nayo yonke iphakheji yezinsizakalo ozitholayo.Ngamathani wemibukiso nama-movie okufanele uwabuke kusuka kwezinye izindlu zokukhiqiza, i-Prime Video ikuvumela ukuthi uthokozele ama-Amazon Specials atholakala kuphela kule nkundla.
Bhalisela i-Prime Video Free Trial
5. I-Amazon Prime Music
I-Samsung Smart TV yakho ayinaso kuphela isikrini esisezingeni eliphezulu ongaziqhayisa ngaso kodwa futhi inezipikha ezimbi. Ngakho-ke kungani ungazisebenzisi ukulalela umculo omnandi.Lolu hlelo lokusebenza lwehlukile kuningi lwe-Smart TV Apps kulolu hlu. Njengoba igama liphakamisa, iPrime Music uhlelo olunikezelwe ukukhonza okuqukethwe komsindo. Ungalalela konke okusha okusha kanye namahithi amadala ngalolu hlelo lokusebenza.Njengoba kushiwo ngenhla, lokhu kuza ngenqwaba nge-Amazon Prime Subscription.
6. IDisney Plus
Uma uyi-Marvel Cinematic Universe (MCU), i-Star Wars, noma i-Disney Fan; mhlawumbe usunayo i-akhawunti ye-Disney Plus. Uma manje, ulindeni?IDisney + ikuvumela ukuthi ubuke konke okuqukethwe yiPstrong, iNational Geographic (Ephethwe yiThe Walt Disney Media Co), i-MCU, i-Star Wars nokunye okuningi.Nekhono lokusakaza okuqukethwe kwe-4K, okucebiswe yiDolby Digital Audio nayo kumadivayisi amaningi ane-akhawunti efanayo. IDisney + kungaba uhlelo oluhle kakhulu lokukhombisa ama-movie nemibukiso emikhulu ku-Samsung Smart TV yakho.
I-Disney Plus iyinhlanganisela engasetshenziswa ngumndeni wonke. Kusukela kuzinto zakudala ze-retro kuya kuma-Superhero movie kusuka ku-MCU kuya kuma-movie we-Disney wezingane. Wonke umuntu uqinisekile ukujabulela lolu hlelo lokusebenza ku-Samsung Smart TV yakho.Ngemali yokubhalisa engu- $ 7 ngenyanga, awukwazi ukuxoxisana okuningi ngeDisney Plus. Cabanga, ama-movie afana ne-Avengers: Eng Game, uDkt Strange, The Mandalorian, Frozen, nokuthi yini epulatifomu efanayo ngemali ephansi.
7. I-Apple TV Plus
Akubanga isikhathi eside kusukela ngesikhathi lapho i-Apple yethula khona izinsizakalo zayo zokusakaza; ngokwethulwa kwayo, i-Apple iphinde yamemezela izihloko eziningana ezintsha ezibandakanya i-SEE kaJason Momoa (okuwumbukiso omuhle ongawubuka uma uthanda ama-epic period thrillers), i-The Morning Show, i-NASA Dramas nokunye okuningi. Ngenkathi i-Apply TV plus iphuma ngonyaka odlule, ibinemibukiso engu-9 kuphela ebizokhonjiswa ngayo, kepha le nombolo ingeyesikhathi esedlule manje. I-Apple TV Plus manje inemibukiso emisha engaphezu kuka-40 kusevisi yayo yokusakaza.
I-Apple TV + ayijoyinanga iqembu labontanga labo, lokufaka izintambo kokuqukethwe kusuka kubakhiqizi abahlukahlukene nezindlu zokukhiqiza; Esikhundleni salokho bagxile ekukhiqizeni nasekuboniseni okuqukethwe okusha bebodwa (Okuhle kakhulu, iNetflix nePrimeal basuthise imakethe kancane ngemibukiso namabhayisikobho amadala.
Ngezihloko eziningi ezitholakala ku-4K, nakanjani kuzoba yinto enhle ukubukela ku-UHD Samsung Smart TV yakho. I-Apple TV Plus ikhokhisa imali ekhokhelwayo engu- $ 5 ngenyanga, futhi uma uthatha uhlelo lokubhalisa lonyaka, uthola izinyanga ezimbili mahhala, okusho u- $ 50 ngokubhaliselwa konyaka Uma ungaqiniseki ngokuqukethwe, ungazama i-Apple TV Plus mahhala ; ngokunikezwa kwecala lezinsuku eziyisikhombisa. Lokhu kungabonakala kuyindleko encane, kepha khumbula ukuthi i-Apple TV Plus inikeza inani elincane kakhulu lemibukiso nama-movie ongakhetha kuwo uma kuqhathaniswa nabanye abasezigabeni ezifanayo ezifana neNetflix, i-Amazon Prime Video, iDisney Plus.
Ama-Samsung Smart TV abe igama lomndeni embulungeni yonke futhi yingakho sicabange ukunqanda lolu hlu lwezinhlelo zokusebenza ze-Best Smart TV zezithameli zethu. Ithimba lethu lizame konke okusemandleni ukunqanda lolu hlu.Njengoba kunezinhlelo zokusebenza ezingaphezu kwamakhulu ezingalandwa, kunzima ukukhetha okungcono kakhulu; kepha sizame konke okusemandleni ethu, sikhumbula izidingo zomthengi wokuqukethwe okumaphakathi. Uma othile ekhokha imali enkulu nge-Samsung Smart TV, kufanele ukuthi bayisebenzise ngokugcwele.
Thina ngokwethu singabathengi kuqala bese kuba okunye, yingakho sikwazi ukuthola lolu hlu.Sithemba ukuthi ukujabulele ukudlula ohlwini. Njengenjwayelo, singathanda ukubona ukuthatha kwakho kulezi zinhlelo zokusebenza. Uma ngabe omunye wenu enezinye izinhlelo zokusebenza abanye abasebenzisi okufanele bazi noma abafuna ukwabelana ngolwazi lwakho nezinhlelo zokusebenza ezishiwo, qiniseka ukusitshela esigabeni sokuphawula ngezansi.
I-VPN ehamba phambili yeDisney Plus
I-ExpressVPN Black Friday 2020 - Iziphesheli kanye nokunikezwa okumangazayo
ungayikhansela kanjani inkokhelo yokuqala ye-amazon
ungayilanda kanjani i-movie online
umhlaba wamakhodi we-premium code
ukusakazwa kwama-movie wamahhala akukho akhawunti
amazon nguwe lowo
bukela ama-movie nochungechunge online mahhala
I-xbox one games amakhodi mahhala